GoDaddy: Ka tagida boogaha gadaal iyo dameer dillaaca | Martech Zone
waan nacay GoDaddy. Runtii waan sameeyay. Maan rumaysan karin in sumad ay ku bixin karto malaayiin doolar jeex jeex jeex jeex oo ay sii wadaan dhisida ganacsi aad u tiro badan. Waxay ahayd dharbaaxo wajiga u ah suuqleyda oo si adag u shaqeeyay si ay magacyadooda ula xiriiraan, hufan, xirfadle ah isla markaana waxtar u leh dhagaystayaashooda. Waxay ahayd sida ugu fudud ee looga baxo… waxayna umuuqatay inay shaqeynayso. Waxaan kula taliyay dhammaan macaamiishayda inay adeegsadaan adeegyo kale kana fogaadaan.
Waqti ka dib, inkasta oo ay sii kordhayaan macaamiisheennu ahaayeen adoo isticmaalaya GoDaddy Oo kaliya ma isticmaalin adeegga, laakiin sidoo kale waxay ii sheegeen adeegga macaamiisha sidee u weyn yahay ka shirkadda runtii ahayd. Marka dhinac ka mid ahi wuxuu ahaa shirkad danaynaysay macaamiisheeda iyo adeegyada ay bixinaysay… dhinaca kalena waxay ahayd astaan ​​iyo olole xayaysiis oo ahaa dhalinyaro iyo madax madhan.
Laakiin mawjaddu way rogmaysaa. Saaxiib Christopher Carfi (oo ku soo biiray kooxda GoDaddy) wuxuu ila soo xiriiray Agaasimahooda Sare ee Xiriirka Dadweynaha, Susie Penner iyo waxaan markii dambe wadahadal aan caadi aheyn la yeelanay Madaxa Isgaarsiinta, Karen Tillman. Taasi waa sax… a Susie iyo a Karen hogaaminta isgaarsiinta cusub! Karen maahan haweeneyda kaliya ee katirsan hogaanka sare. Blake Irving, Maamulaha cusub ee GoDaddy oo la magacaabay dhamaadkii 2012 wuxuu isbadal badan ku sameynayay shirkada horumarinaysa magaca… iminkana GoDaddy wuxuu isu diyaarinayaa IPO-kooda.
Xayeysiiska GoDaddy sidoo kale wuu isbedelayaa! Waxay sii daayeen xayeysiiskan SuperBowl kaas oo siinaya sumad gabi ahaanba ka duwan iyo fariinta dadweynaha, GoDaddy wuxuu dadka ka caawinayaa inay riyooyinkooda u rogaan ganacsi.
Adeegyo cajiib ah - laga bilaabo Domains, Hosting, WordPress Hosting, shahaadooyin SSL, Microsoft Office 365 martigelinta, Xisaabinta Khadka Tooska ah, Dhisaha Mareegta, Ecommerce iyo barnaamijyada Goobidda Maxaliga ah… GoDaddy gabi ahaanba waxa uu haystaa agabka ugu jaban ee ay heli karaan ganacsiyada yaryar. Ku habboon adeeggooda weyn, waxaanan ku kalsoonahay inay u socdaan jihada saxda ah.
Inkastoo xayeysiis iyaga ayaa ka dambeeya, taasi micnaheedu maahan GoDaddy inuu jilicsan noqday! Baadhid ManDesto GoDaddy ee Kick Ass:
Hambalyo, GoDaddy! Waxaan u maleynayaa inaad durbaba dameer dabada laadinayso.
Tags: Blake Irvingceo godddykiristofar carfigodaddybilowga hore ee dadweynahaipoKaren Tillmansusie qalinkaManDesto GoDaddy ee Kick Ass